Daawo Video: Iiraan oo sheegtay in ay 80 Askari ku dishay duqeyn ka dhacday wadanka Ciraaq.
Wednesday January 08, 2020 - 09:24:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Qaar kamid ah Saldhigyada Melleteri ee ciidamada Mareykanka uga suganyihiin wadanka Ciraaq ayaa xalay lakulmay weeraro sawaariikh ah kuwaas oo uga yimid dowladda Shiicada Iiraan.
Taliska ciidanka ilaalada Kacaanka Iiraan ayaa ku dhawaaqay in 12 saaruukh nuuca ridada fog ah ay ku weerareen laba saldhig oo ciidamada Mareykanka uga suganyihiin galbeedka iyo Waqooyiga dalka Ciraaq.
Duqeynta ugu xooggan waxay ku dhacday saldhigga Ceynul Asad oo kumanaan Askari American ah ku suganyihiin, Telefeshinka rasmiga ah ee dowladda Iiraan ayaa baahiyay muuqaallo muujinayay sawaariikh ku hoobanaysa saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq.
Afhayeen u hadlay Xukuumadda Tahran wuxuu sheegay in 80 askari American ah ay ku dhinteen duqeynta boqolaal kalane ay ku dhaawacmeen, ilo wareedyo ayaa sheegaya in dhowr saaruukh lala helay saldhigga Mareykanka ee kuyaal magaalada Arbiil ee waqooyiga Ciraaq.
Donald Trump oo farriin kooban soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu sheegay in wax dhib ah aysan jirin balse ay wadaan baaritaanno ku aaddan waxyeellada ka dhalatay duqeymihii lagu qaaday saldhigyada ciidamadiisa Ciraaq.
Wasaaradaha difaaca dowladaha Australia iyo Norway waxay sheegeen in wax khasaara ah aysan gaarin ciidamadooda ku sugan Saldhiga Ceynul Asad ee Iiraan ay duqeysay, saldhiggan oo kuyaal gobolka Al Anbaar waxaa ku sugan ugu yaraan 2 kun askar American ah.
Dowladda Iiraan ayaa weerarkan ay ku qaadday saldhigyada ciidamada Mareykanka ugu magac dartay Qaasim Suleymaani oo ah Jeneraal melleteri oo Jimcihii lasoo dhaafay Mareykanku uu ku dilay garoonka diyaaradaha magaalada Baqdaad.
Hoos Ka Daawo Video qaabkii loo duqeeyay saldhigyada Mareykanka Ciraaq